နိုငျးဝမျး၊ D ဖွိုး၊ Waiလြှံ၊ Okka တို့နဲ့ သီခငျြးဆိုဖို့အတှကျ ယုနျလေးကို လာငှားခဲ့ပွီး အခွားအနုပညာရှငျတှကေို အနုပညာ ကွေးပေးဖို့ စီစဉျထားပမေယျ့ သူ့ကိုတော့ ဒီတိုငျးဆိုပေးဖို့ ပွောခဲ့တယျတဲ့။ သူ့ကို အဲ့လိုပွောခဲ့ပမေယျ့လညျး ပှဲရှငျကို ဒေါသမဖွဈမိပဲ ကိုယျ့ကိုကိုယျသာ သိမျငယျသှားသလို ခံစားခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Photo : ယုနျလေး FB
အဆိုတျော ယုနျလေးတဈယောကျ ပှဲရှငျတဈယောကျရဲ့ စကားတဈခှနျးကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ သိမျငယျသှားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အခုခြိနျထိ အနှိမျခံဘဝက မလှတျသေးပါလားဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ တှေးမိတဲ့အထိ ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
ယုနျလေးကို နိုငျးဝမျး၊ D ဖွိုး၊ Waiလြှံ၊ Okka တို့နဲ့ သီခငျြးဆိုဖို့အတှကျ ပှဲတဈပှဲ လာငှားခဲ့ပမေယျ့ အခွားသော အနုပညာရှငျတှေ အနုပညာ ကွေးပေးဖို့ စီစဉျထားပွီး သူ့ကိုတော့ Budget မရှိတော့တဲ့အတှကျ ဒီတိုငျး ဆိုပေးဖို့ ပွောခဲ့တယျဆိုပွီး ယုနျလေး ဖွဈစဉျကို သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျမှာ ယခုလို ပွောခဲ့ပါတယျ။
"ကိုယုနျလေး အပွငျဘယျသူတှရှေိဦးမလဲပေါ့။လကျတလောအားတာ သူငယျခငျြးတှေ Nine One၊D Phyo၊ Wai Hlian၊ Okka . ပေါ့ အနုပညာကွေး မေးပွီး သူတို့ပေးဖို့အဆငျပွပေါတယျပေါ့ ပြျောပြျောပါးပါးသှားဆိုကမြယျပေါ့ .ကနျြတဲ့ ၄ယောကျကိုတော့ အဆငျပွတေယျ . ကိုယုနျလေးတော့ ဒီတိုငျးမတ်ေတာနဲ့ လိုကျဆိုပါတဲ့ . Budget မရှိတော့လို့ပါတဲ့ .ကိုယုနျလေးကို လူလဲသိတာပေါ့တဲ့ .ဒေါသမဖွဈဘူး။ကိုယျဟာ ကိုသိမျငယျသှားတယျ။ငါဒီ အခြိနျထိ လူအထငျသေးခံနရေတုနျးပဲ ဒါမှမဟုတျ သဘောအရမျးကောငျးလို့လား လုပျလို့ရရငျ လူ့လောကမှာ လုပျတကျကတြယျလကေိုယျ့ဟာကို နာမညျကွီးတယျမပွောပါဘူး . သီခငျြးဘကျမှာလဲတညျဆောကျ သငျ့သလောကျတညျဆောကျပွီးပါပွီ " ဆိုပွီး ဒီဇငျဘာ(၅) ရကျနကေ့ ရေးသားထားတာပါ။
မွငျ့မွတျရဲ့ သူငယျခငျြးကောငျးပီသမှုတှကေို ပွောလာတဲ့ ယုနျလေး
ဘာဖွဈလို့ သူ့ကို အခုခြိနျထိ အနှိမျခံဆကျဆံနသေေးတာလဲဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျထားပါတယျ။
"ဘာဖွဈလို့ ဒီလိုတှအေနှိမျခံဆကျဆံခံနရေသေးတာလဲ .ကြှနျတော့ရဲ့ ညီအဈကိုတှကေလညျး ခဈြဖို့ကောငျး ညီခကျြ . သူတို့လညျး ဘယျလောကျရရ မသှားဘူးတဲ့ ပှဲပကျြသှားပါတယျ။ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျယုံကွညျရာ ကိုယျ့အလုပျကိုရှဆေ့ကျနမှောပဲ ." ဆိုပွီး ယုနျလေးက ဆကျလကျရေးသားထားပါသေးတယျ။ဒီလထဲမှာလညျး သီခငျြးလေးတှေ ပွနျတငျဖို့ စီစဉျထားပွီး သီခငျြးသဈတှလောရငျလညျး ပရိသတျတှေ အားပေးကွပါဦးလို့ ပွောထားပါတယျ။
သူဟာ အနုပညာအလုပျတှလေညျး ဆကျတိုကျဆောငျရှကျနသေလို ပရဟိတအလှူဘကျမှာလညျး မပွတျမကှကျ ဆောငျရှကျနေ သူဖွဈပါ တယျ။ လကျရှိမှာလညျး အနုပညာနဲ့ပတျ သကျတဲ့ အလုပျတှေ အမြားကွီးဆောငျရှကျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
နိုင်းဝမ်း၊ D ဖြိုး၊ Waiလျှံ၊ Okka တို့နဲ့ သီချင်းဆိုဖို့အတွက် ယုန်လေးကို လာငှားခဲ့ပြီး အခြားအနုပညာရှင်တွေကို အနုပညာ ကြေးပေးဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် သူ့ကိုတော့ ဒီတိုင်းဆိုပေးဖို့ ပြောခဲ့တယ်တဲ့။ သူ့ကို အဲ့လိုပြောခဲ့ပေမယ့်လည်း ပွဲရှင်ကို ဒေါသမဖြစ်မိပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ သိမ်ငယ်သွားသလို ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဆိုတော် ယုန်လေးတစ်ယောက် ပွဲရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမ်ငယ်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုချိန်ထိ အနှိမ်ခံဘဝက မလွတ်သေးပါလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွေးမိတဲ့အထိ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ယုန်လေးကို နိုင်းဝမ်း၊ D ဖြိုး၊ Waiလျှံ၊ Okka တို့နဲ့ သီချင်းဆိုဖို့အတွက် ပွဲတစ်ပွဲ လာငှားခဲ့ပေမယ့် အခြားသော အနုပညာရှင်တွေ အနုပညာ ကြေးပေးဖို့ စီစဉ်ထားပြီး သူ့ကိုတော့ Budget မရှိတော့တဲ့အတွက် ဒီတိုင်း ဆိုပေးဖို့ ပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီး ယုန်လေး ဖြစ်စဉ်ကို သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ယခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်။
"ကိုယုန်လေး အပြင်ဘယ်သူတွေရှိဦးမလဲပေါ့။လက်တလောအားတာ သူငယ်ချင်းတွေ Nine One၊D Phyo၊ Wai Hlian၊ Okka . ပေါ့ အနုပညာကြေး မေးပြီး သူတို့ပေးဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးသွားဆိုကျမယ်ပေါ့ .ကျန်တဲ့ ၄ယောက်ကိုတော့ အဆင်ပြေတယ် . ကိုယုန်လေးတော့ ဒီတိုင်းမေတ္တာနဲ့ လိုက်ဆိုပါတဲ့ . Budget မရှိတော့လို့ပါတဲ့ .ကိုယုန်လေးကို လူလဲသိတာပေါ့တဲ့ .ဒေါသမဖြစ်ဘူး။ကိုယ်ဟာ ကိုသိမ်ငယ်သွားတယ်။ငါဒီ အချိန်ထိ လူအထင်သေးခံနေရတုန်းပဲ ဒါမှမဟုတ် သဘောအရမ်းကောင်းလို့လား လုပ်လို့ရရင် လူ့လောကမှာ လုပ်တက်ကျတယ်လေကိုယ့်ဟာကို နာမည်ကြီးတယ်မပြောပါဘူး . သီချင်းဘက်မှာလဲတည်ဆောက် သင့်သလောက်တည်ဆောက်ပြီးပါပြီ " ဆိုပြီး ဒီဇင်ဘာ(၅) ရက်နေ့က ရေးသားထားတာပါ။
မြင့်မြတ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းပီသမှုတွေကို ပြောလာတဲ့ ယုန်လေး
ဘာဖြစ်လို့ သူ့ကို အခုချိန်ထိ အနှိမ်ခံဆက်ဆံနေသေးတာလဲဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။
"ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုတွေအနှိမ်ခံဆက်ဆံခံနေရသေးတာလဲ .ကျွန်တော့ရဲ့ ညီအစ်ကိုတွေကလည်း ချစ်ဖို့ကောင်း ညီချက် . သူတို့လည်း ဘယ်လောက်ရရ မသွားဘူးတဲ့ ပွဲပျက်သွားပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုရှေ့ဆက်နေမှာပဲ ." ဆိုပြီး ယုန်လေးက ဆက်လက်ရေးသားထားပါသေးတယ်။ဒီလထဲမှာလည်း သီချင်းလေးတွေ ပြန်တင်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး သီချင်းသစ်တွေလာရင်လည်း ပရိသတ်တွေ အားပေးကြပါဦးလို့ ပြောထားပါတယ်။
ယုန်လေး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Original Gangster ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး၊ Speical9ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကလည်း ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူ ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းတွေကို ဖန်တီးတတ်တဲ့ ယုန်လေးကတော့ နောက်ထပ် ဘယ်လို ဇာတ်ကောင်းတွေ ပြင်ဆင်သွားမလဲဆိုတာကတော့ မကြာခင် သိရတော့မှာပါ။
သူဟာ အနုပညာအလုပ်တွေလည်း ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေသလို ပရဟိတအလှူဘက်မှာလည်း မပြတ်မကွက် ဆောင်ရွက်နေ သူဖြစ်ပါ တယ်။ လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာနဲ့ပတ် သက်တဲ့ အလုပ်တွေ အများကြီးဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ယုန်လေးက သူကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးကြသူများ ၁ ၊ Original Gangster 1 စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင် ခဲ့သူပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကနေတဆင့် ပရိသတ်အားပေးမှုလည်း ပိုမိုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာလည်း သီချင်းတွေ ရေးပေးဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။